Lacuniacha, dabeecadda ifaysa | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Ekotourism, Espana, General
Lacuniacha waa magaca meel gaar ah oo ku habboon dhammaan dabeecadaha jecel. Waxay ku saabsan tahay a seeraha duurjoogta, Marka haddii aad jeceshahay xayawaanka ama aad haysato kuwa yaryar oo aad rabto inaad aragto xayawaan nool oo toos ah oo aan TV ga ahayn, waa inaad ogaataa meeshan.
Waxay ku jirtaa Aragón, ee gobolka Huesca, ee aagga Pyrenees-ka dhexe. Xilliga xagaaga iyo jiilaalka labadaba waxbaa la siiyaa. Aan aragno waxa.
1 Beerta Duurjoogta Lacuniacha
2 Booqo Beerta Duurjoogta ee Lacuniacha
Beerta Duurjoogta Lacuniacha
Waa jardiinooyin cusub maxaa yeelay furmay 2001, oo ku beegan bilowgii qarnigii. Ayaa ku yaal dooxada Tena, oo u dhow magaalo yar oo la yiraahdo Piedrafita de Jaca. Magaca xiisaha leh oo xoogaa la yaab leh wuxuu ka yimid badaha dabiiciga ah ee qurxin jiray muuqaalka, laakiin aakhirkii si dabiici ah u lumay iyada oo loo marayo geeddi-socodka siltingka. Markii biyuhu dib dambe u madoobaadeen, dhirta waxay bilaabeen inay dhul helaan oo waxay ku dhammaadeen inay la wareegaan wax walba. Waxa kaliya ee haraaga ah ayaa ah dooxada bullaacadaha waxaadna arki doontaa marka ay tahay waqtigaaga inaad ku dhex socoto dhulka lynx.
Runtu waxay tahay tan iyo 2001 kumanaan iyo kumanaan dad ah ayaa booqday oo booqda, sida ku xusan sahaminta waa guul iyo baashaal la hubo. Beerta cabirkeedu waa soddon hektar waana lagu dabooli karaa socod wacan oo u dhexeeya laba ama saddex saacadood. Ku network raad Si aad u wanaagsan ayaa loo calaamadiyey oo loo fikiray loona qaabeeyey si socodku u ogaan karo waxyaabaha yaabka leh iyo waxyaalaha dabiiciga ah ee meesha yaal.
Meel, ha iloobin, taasi waxaa ku nool xayawaan badan oo halkaan kumanaan sano ku noolaa xaalad dabiici ah, markaa fursadda aad ku aragto sidan oo kale waa weyn tahay. Waddooyinku waxay ku siinayaan kaararka kaynta iyo Pyrenees iyo dabeecadaha xoolaha sidoo kale.
Wadada guud ee ilaa shan kiiloomitir, in yar oo dheeraad ah, waxyarna kayar, oo wadarta farqiga u dhexeeyaa uu yahay 180 mitir waxaad dhammaystireysaa wadada. Dhab ahaan, waxaa habboon in la caddeeyo, jardiinadu ma ahan xero xayawaan ama jardiino u gaar ah ama wax lamid ah. Waxaad aadi doontaa keyn, dabeecadna ku leh xaalad nololeed. Waxa hada la sheegayo, a biopark. Xayawaanku dhammaantood waxay ku dhasheen maxaabiis ahaan, qaarna halkaas ayey ku jiraan, qaarna hoyga badbaadinta, qaarna xarumaha soo kabashada.
Xoolaha meesha ka muuqda waxaa ka mid ah Fardaha Przewalski, deerada deerada, deerada, sarrios, yeyda, borel lynx, bisinka yurub, deerada, dabagalka, shimbiraha, bahalka, deerada iyo ariga buuraha. Waxaa lagu qiyaasaa inay jiraan ilaa 120 xayawaan oo ka mid ah shan iyo tobanka nooc ee kala duwan ee ku nool jardiinada. Iyo qaybta cagaaran ee kaarka boosta, marka la yiraahdo, waxay leedahay bjchrk, sanduuq, beech, qodax, geed, geedkii, dambas, holly21 nooc oo dhir ah wadar ahaan.
Beerta Waxay furantahay sanadka oo dhan asal ahaana asal ahaan uma jeedin inay kala dhigto xayawaanka iyo aadanaha. Taasi waa sababta ay u fiicantahay in la ogaado in xayawaanku aysan aad u baqeyn ama aysan ka fogaan dadka, sidaas darteed carruurtu way ku faraxsan yihiin. Intaas waxaa sii dheer, hektar waxay ka mid yihiin keymo qadiimi ah oo la yiraahdo La Pinosa, Meel ay gacanta ninku si dhib leh u taabato muddo ka dib.
Beerta ayaa loo qaybin karaa Lacuniacha hooseeya y Lacuniacha sare. Beerta koowaad waxaad ka heli doontaa kaynta isku dhafan tan labaadna waxaa ku jira nidaam bey'adeed oo cagaaran oo leh geedo yaryar, ubaxyo duurjoog ah iyo seero ballaadhan. Labada dhexdooda waxaa ku yaal muuqaal qurux badan aragtidaSida iska cad, badda dhexdeeda meelaha istiraatiijiga ah si aad u qadarin karto dhammaan quruxda goobta oo ay ku jiraan, waa in aynaan iloobin, dhagaxii hore ee Pyrenees.
Dhinaca kale Lacuniacha biopark waa qayb ka mid ah keydka Ordesa-Viñamala Biosferra, midka kaliya ee ka jira dhulka Aragon (tusaale ahaan caadiga ah nidaamka deegaanka ee buuraha oo si hinaaso leh u ilaaliya dhowr nooc oo halis ugu jira baabi'inta); oo lagu daray kaqeybqaado barnaamijka soo kabashada bisinka Yurub sidaa darteed dhallinta halkaan ku dhasha hal maalin ayaa laga sii dayn doonaa waqooyiga Yurub.
Booqo Beerta Duurjoogta ee Lacuniacha
Waxaan dhahnay way furantahay sanadka oo dhan marka ka fiirso dharka aad xiraneyso iyo kabo raaxo leh taas oo kuu oggolaaneysa inaad ku socoto socod wanaagsan oo dhulka ah. Hadaad go aansato inaad tagto maalmahan ama goor dhow, deyrta, jiilaalka, xiro dhar diirran iyo Kabaha buurta iyo adeegsiga ulaha xitaa waa lagugula talinayaa maadama wadooyinka ay jiri karaan baraf ama baraf.
In kasta oo aad qiyaasi karto, waan caddeeyay: Kama wareegi kartid kuraasta curyaamiinta ama gawaarida carruurta. Haddii aadan haysan boorsada dhabarka ee ilmaha, waxaad ka kireysan kartaa soo dhoweynta baarkinka. Kuma raaci kartid xayawaanka rabaayadda ah iyo sida iska cad, Ma cabi kartid sigaar meelna uga jirin.
Macluumaad la taaban karo oo ku saabsan booqashada
Saacadaha: laga bilaabo Julaay 1 illaa 31 Ogosto, beerta nasashada waxay furan tahay Isniinta illaa Jimcaha markay tahay 10ka subaxnimo ilaa 8da galabnimo iyo Sabtiyada iyo ciidaha laga bilaabo 10 subaxnimo ilaa 8 fiidnimo. Laga bilaabo Sebtember 1 ilaa Oktoobar 15 waxay qabataa maalmaha shaqada 10 subaxnimo ilaa 6 galabnimo iyo Sabti iyo ciidaha ilaa 8da fiidnimo. Laga bilaabo Oktoobar 16 ilaa Maarso 31 ee usbuuca wuxuu furmayaa 10 subaxnimo ilaa 6 galabnimo sabtiyada iyo ciidahana wuxuu xirmayaa 6 sidoo kale. Laga bilaabo Abriil 1 ilaa Juun 30, wuxuu furmaa isla waqtigaas maalmaha shaqada laakiin wuxuu xirmaa 8da fiidnimo Sabtiyada iyo ciidaha. Kirismaska ​​waad tagi kartaa laakiin waxay furmaysaa 11 am ilaa 3 pm.
Qiimaha: waxaad tikidhada ka iibsan kartaa khadka tooska ah ee shabakada baarkinka ama halkaas ilaa laba saacadood kahor xiritaanka. Tigidhada caruurta (laga bilaabo 4 ilaa 11 sano jir), waxay ku kacaysaa 12 euro, tigidhada dhalinyarada (laga bilaabo 12 ilaa 17 sano jir), 14 euro, tigidhada qaangaarka ah waxay ku kacaysaa 16 euro iyo tigidhka waayeelka ah, ee loogu talagalay kuwa ka weyn 64 sano, 12 yuuroo
Adeegyo noocee ah ayaa baarkinka u fidiyaa dadka soo booqda? Waxaa jira a bar banaanka si loo nasto bilowga ama dhammaadka safarka ee u adeegaya cuntada kulul iyo kuwa qabow. Waxay leedahay adeeg aad ku bixin karto tigidhka laftiisa, taas oo ah, waad bixin kartaa gelitaanka + menu markaad gaarto jardiinada. Isku-dhaf, waxaan dhihi lahayn. Kadib, kala badh safarka, waxaa jira baarar kale oo leh meel nasasho iyo teendho haddii aad la yaabto roob ama baraf. Halkan waxaad ku cuni kartaa aagga nasashada.
Ugu dambeyntii, ma seegi kartid Xusuusta xusuusta marka lagu daro ku siinta mid ka mid ah safaradaada waxay siinaysaa ilaha beerta lafteeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Lacuniacha, dabeecadda dhalaalaysa
Astaamaha hudheelada aan carruurta lahayn